Matambudziko Emeno | OptiSmile ™ Yepamberi Dentistry
Kubuda ropa mazamu maererano newe? Kunzwa kunyara nezvekushaya meno uye halitosis? Usanyara kana kunyara, isu tiri pano kuzobatsira. Tsvaga zvimwe nezve izvi zvinowanzoitika matambudziko emazino uye edu mashoma invasive, marwadzo emahara mhinduro. Chikwata chedu chine ruzivo chevaCape Town vanachiremba vemazino chakashongedzerwa zvakakwana uye vakagadzirira kubatsira.
Kubva pameno anopinza kusvika kumeno asina kukwana, nekuda kwekukurumidzira kana kuora, tsvaga zvimwe nezvekurapa kwedu.
Pave nemakore kubva apo chiremba wemazino akatarisa mumuromo mako? Usanyara, kudzivirira kuri nani pane kurapwa, asi isu tinogona kuzviita zvese kana zvichidikanwa uye kudzosa chivimbo chako.
Kubuda ropa maGums
Ingori Inguva Yekushanya
Une meno akasviba kana kuti anopenya here? Mazino ako akakombama uye achirwirana nzvimbo? Ngativandudze kunyemwerera kwako nema orthodontics uye cosmetic dentistry.
Ndinoda Kunyemwerera Kukuru
Yepasirese Kirasi Sevhisi Ndiko Kwedu Guarantee
Vanachiremba vedu vemazino muKapa takazvipira kukuita kuti unzwe kugadzikana, uku uchipawo yakanakisa mhedzisiro. Isu tine chivimbo kwazvo pabasa redu zvekuti tinotsiva chero zadza kana mbichana izvo zvinogona kubuda (nekuti tinoziva kuti havazodi!) Zvese zvaunoda kuti uite kuvimbisa kuzvichengeta.
Handina kumbobvira ndafunga kuti kuenda kuna chiremba wemazino kwaizova "chiitiko," uye chaicho chinonakidza! Kubva kwandakafonera kekutanga, sevhisi yaive nehunhu, inodziya uye ine hushamwari. Ini ndakapeputswa zvachose neiyo tekinoroji - kunyanya kuti kurapwa kwangu kwakaitwa pasi pe microscope, iyo inogona kutora mifananidzo. Mahedhifoni - achipa mimhanzi yesarudzo yangu yaive yakamisikidzwa Kwaitove kutandara. Iko 21st century dentistry - pasi pasi mazita ekutanga pazita mabheji uye kushambadzira midhiya yenhau Ndinokutendai Clifford, Akhona naJuliet. Ndichadzoka zvechokwadi!
Wese munhu kubva kuReception, vabatsiri, Dr Clifford Yudelman newaanoshanda naye Dr Harris Smeyatski vaigara zvakanaka uye vane hushamwari ivo vari nyanzvi. Zvivakwa zvacho zvave zvemuchadenga-zera zvemazuva ano uye zvakachena, ndanga ndichitarisa hafu yenguva uye ndaikwanisa kuzorora ndichiziva kuti ndaive mumaoko akanaka ndisina kuchengetwa munyika sezvo nyaya dzangu dzemazino dzaichengetwa. Waita zvakanaka OptiSmile !! Ndichadzoka…
Matipi Ekuchenesa Mazino Ako Paunenge Uchipfeka Brace
Brace kuOptismile isu tinobatsira varwere vane meno ekugadzirisa uye kudzorera kunyemwerera. Nekudaro, zvinogona kuve zvinonetsa kuchenesa mazino ako kana uri mukusunga. Izvi zvinowedzera